Ogaden News Agency (ONA) – CJWXO oo saaka kugalay Cidamada gumeysiga meel u dhow Qabridahare
CJWXO oo saaka kugalay Cidamada gumeysiga meel u dhow Qabridahare
Posted by ONA Admin	/ November 2, 2012
02/11/2012- Ciidamada Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa Saaka aroorti jidgooye u dhigay Ciidan duulaan ah oo kamida ciidamada Gaarka ah ee Gumeysiga Ethiopia ee u tababaran xasuuqa shacabka Ogadeniya.
Sirdoonka CJWXO ayaa ka warhelay ciidananka Woyanaha ee kusugan magaalada Qabridahar oo usoo baxay asaso ay rabeen inay kusoo waxyeeleeyaan shacabka deegaanka Karibilicle. Waxayna CJWXO ay jidka usii istaageen jidgooyena u dhigeen meel aan saas uga sii foegyn magaalada Qabri dahare.
Waxaa daggaalkaas Ciidamada gumeysiga lagaga dilay laba Askari waxaana lagaga dhaawacay 3 Askari inta oo kale, iyada oo ciidankii Woyanuhu uu firxaday. Waxaana qeyb kamid ah oo dhaawac iyo firkxadkoodi kamid ah ay soo galeen magalada Qabridahar.
Warkan oo hordhac ah Faah fahintiisa dib ayaan kala socon doona.